Bam gacmeed caawa lala beegsaday goob filmaanta lagu daawado magaalada Bosaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Bam gacmeed caawa lala beegsaday goob filmaanta lagu daawado magaalada Bosaso
Tagged With: Qarax Bosaso
Bam gacmeed caawa lala beegsaday goob filmaanta lagu daawado magaalada Bosaso
Qarax sababay khasaaro dhaawac ah ayaa caawa fiidnimadi lala beegsaday goob lagu daawado aflaanta oo ku taalay bartamaha magaaladan Bosaaso.
Goobta lala beegsaday qaraxa ayaa waxaa ku sugnaa dad u dhashay dalka Itoobiya kuwaas oo u badan qawmiyada Oromada waxayna halkaas ka daawanaayeen filmaanta laga shido isla mar ahaanta ay ahaayeen dadka ugu badnaa ee halkaas ku sugnayd.
Dadkii ku dhaawacmey qaraxa ayaa la geeyay Isbitaalka guud ee magaalada Bosaso halkaas oo lagu daaweeyay dhaawacyadii ka soo gaaray firirka bamka lagu soo tuuray, Saraakiisha caafimaadka ee aan waraysanay ayaa inoo xaqiijiyey in dhaawac guud ee la soo gaarsiiyey u gaarayo 19-qof,Â kuwaas oo 15-ka mid ah ay yihin Itoobiyaan halka 4-ta kale ah ay yihin Soomaali, waxaana isugeynta qaraxa u gaaraya ku dhowaad 25-qof.
Laamaha amaanka ee gobolka Bari oo aanÂ la kulanay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxaas, waxaana ay sheegeen in ay gadaal ka hadli doonaan oo ay Saxaafada uga warbixin doonaan.
Kooxaha amnidarada ka wada gudaha Puntland ayaan u meeldeyin falalkooda iyaga oo muujinaya in ay weli shaqeynayaan oo aan laga adkaan, sidoo kale shaqaaqooyinka ka taagan gudaha Itoobiya ayaa door muuqan kara ku leh gudaha Puntland.